Relicensure - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Guddiga Relicensure Robbinsdale
Ujeedada Gudiga Relicensure Robbinsdale ayaa ah in la maareeyo diiwaan gelinta iyo warbixinta looga baahan yahay shaqaalaha iyo xubnaha bulshada in ay haystaan rukhsad si wanaagsan ula shaqeysa gobolka Minnesota. Hab fudud oo aad ku hubin karto dhicitaanka liisankaagu waa iyada oo loo marayo raadinta liisanka .
Guddiga Relicensure Robbinsdale wuxuu ka kooban yahay koox aqoonyahanno kala duwan ah. Waxaan kulannaa shan jeer sanadkii. Maalmahaas, waxaan ku shaqeeynaa magacaaga si aan u maamulno oo u oggolaano CEUs. Waxaan la xiriirnaa isbeddelada muhiimka ah iyo su'aalaha dib-u-soo-celinta goobta. Dayrta sanadka ka hor inta aan shatigaaga loo qoondeyn inuu cusbooneysiiyo, waxaan la xiriirnaa tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo. Kadib waxaan usheegnaa PELSB (gudiga ruqsad bixinta gobolka) markay shaqsiyaadka diyaar uyihiin inay cusboonaysiiyaan.
Waxaan sidoo kale taageernaa raadinta CEUs iyo dib-u-xisaabinta shaqsiyaadka shaqaalihii hore, beddelka, ama xubnaha bulshada. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno hawsha cusboonaysiinta liisanka.
Fadlan la soco in Guddiga Relicensure ay kulmaan markii ugu dambeysay bartamihii Maajo mana kulmaan inta lagu jiro xagaaga. Dhammaan agabyada cusboonaysiinta waa inay ku jiraan ka hor kulanka May.
Macluumaadka Cusboonaysiinta Liisanka
Barayaashu waxay bilaabi karaan howsha dib u cusbooneysiinta shatiga bisha Nofeembar ee sanadka uu shatigooda dhacayo. Barayaashu waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha cusboonaysiinta khuseeya ka hor intaanay bilaabin hawsha cusboonaysiinta liisanka. Nidaamyada cusboonaysiinta liisanka waxaa laga heli karaa dukumintiyada hoose ee ka socda Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka shatiyeysan ee Infographic
Qaybaha loogu talagalay Qoondaynta Saacadda Saacadda